Fanafanana & insulation vahaolana, ihany ho anao
Shanghai PAMAENS TECHNOLOGY CO., LTD specializes amin'ny ny R & D, famokarana ary ny varotra ny angovo-fanafanana fahavaratra ary fiarovana vokatra. PAMAENS manome fametrahana, fiofanana sy Ankehitriny-fivarotana iray-mijanona fanompoana. PAMAENS Lasa ny mpitarika eo amin'ny sehatry ny angovo orinasa fangatahana-mamonjy fanafanana ny teknolojia ao Shina sy tany ivelany.
PAMAENS efa nahazo taona ISO9001 sy RoHS mari-pankasitrahana. Azo ampiharina sy ny fitsapana henjana fanaraha-maso ny biby rehetra anjara tokana ny vokatra ary koa isaky ny dingana fikarakarana. Ny vokatra no amidy any Eoropa, Amerika, Moyen-Orient, Azia Atsinanana Atsimo, Aostralia, Japana, Rosia sns
PAMAENS manana rafitra fanaraha-maso hentitra amin'ny kalitao ara-nofo eny ifotony, fanodinana orinasa mpamokatra entana, sy ny fitiliana ny vokatra. Tsy misisika amin'ny fampiasana fitaovana avo lenta manta sy hizaha ny fitaovana no ampiasaina.
Ny orinasa PAMAENS, manana ISO 9001, taona RoHs fanamarinana sy taratasy fanamarinana ho an'ny ankamaroan'ny ny vokatra.